ကျွန်ုပ်နှင့်ဆရာတာရာမင်းဝေရဲ့ဈာပနခရီးမှတ်တမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ကျွန်ုပ်နှင့်ဆရာတာရာမင်းဝေရဲ့ဈာပနခရီးမှတ်တမ်း
Posted by အာဂ on Aug 6, 2011 in Arts & Humanities, Celebrity |7comments
ဒီပိုစ်လေးက လွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်လောက် ကျွန်တော့် ဘလော့မှာတင်ထားတဲ့ ပိုစ့်လေးပါ။အခုဆရာဆုံးသွားတာ ဒီလ ၈ရက်နေ့ဆိုရင် ၄နှစ်တင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ဆရာကိုချစ်ကျသူတွေ။ဆရာ့စာပေတွေထဲမှာ ကျေနပ်မှုတွေနဲ့ ကခုန်နေခဲ့ဖူးသူတွေအတွက် အမှတ်တရအနေနဲ့ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဓာတ်ပုံတွေကတော့ ပျောက်ဆုံးသွားလို့ မတင်နိုင်ခဲ့တာခွင့်လွတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
၃၃လမ်းထိပ်မှာအသိတစ်ယောက်ကိုတွေ့တော့မေးလိုက်တယ် ကားထွက်သွားပြီလားလို့ပေါ။့ အသိကပြန်ပြောရှာပါတယ်။-ကားတွေထွက်လို့မရဘူးပြသနာတွေတက်နေတယ်-တဲ့ပထမတော့ကျွန်တော်လည်းမယုံပါဘူး။ဒါပေမယ့်ကိုယ်တိုင်မြင်မှပဲယုံခဲ့ရပါတယ်။
မယ်လို့လုပ်တုန်း။ကျွန်တော်သေသေချာထပ်ကြည့်မိလိုက်တော့ ဆရာ့အသုဘကိုပို့မယ့်လူတွေထဲကသုံးယောက်လောက်က၊စာရေးဆရာတာရာမင်းဝေ၊အသက်(၄၁)စတဲ့စာရွက်ဖြူလေးတွေကိုင်တန်းစီပြီးရပ်နေတာ တွေ့လိုက်ရတော့ကျွန်တော်သိပ်မသင်္ကာတော့ဘူး။ သူတို့ရပ်နေတဲ့ပုံစံကတစ်စုံတစ်ခုကိုဆန္ဒပြနေသရောင်ပဲလေ။
လိုက်ပို့ဖို့ပြင်နေကြတာပါ“လို့ပြောပြရသေးတယ်။သူတို့မေးမယ်ဆိုလည်းမေးလောက်စရာအဲဒီမှာရပ်နေကြသူတွေ၊စာရွက်တွေကိုင်ထားကြသူအချို့တွေကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ NLD၀တ်စုံတွေနဲ့ လေ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီဘက်ကားလမ်းရုပ်ရှင်ရုံရှေ့ကနေပြီး
ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော့်ကိုရိုက်၇င်ထီးနဲ့ကွယ်လိုက် လွတ်ရင်ပြန်ရိုက်လိုက်လုပ်နေတော့တာ။ မကြာပါဘူး အဲဒီလူတွေကကျွန်တော့်ကိုပေါ်တင်ကြီးထပ်ပြီးလာရိုက်နေတော့ကျွန်တော့် စိတ်ထဲထောက်လှမ်းရေးတွေထင်လို့အဲဒီနေရာနဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းနေရာကိုပြေးထွက်သွားလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်သွားခါနီးတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ အဲဒီကင်မာကိုင်တစ်ယောက် ကနောက်တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော့်ကိုချက်ပြလိုက်တာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်က၃၃လမ်းထိပ်ဘက်ကကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့၊လေထန်
ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီတော့သူက“အကိုက၈၈မျိုးဆက်သစ်လူငယ်အဖွဲ့ကပါ။ ရွှေဘုန်းတို့နဲ့အကိုတို့ကကျောင်းတုန်းက တစ်နှစ်တည်းမိုလို့အခုလိုက်ပို့တာလေ”တဲ့ ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော့်ကစာရူးပေရူးတစ်ယောက်ပါ။ပြီးတော့ဆရာ့ကိုအရမ်းကြိုက်တဲ့
အဲဒီတော့မှသူက “အော်မသိပါဘူး။အကိုတို့ကမင်းဟိုဘက် နေဓာတ်ပုံတွေရိုက်နေတော့ထောက်လှမ်းရေးကလူမှတ်လို့။ ပြီးတော့မင်းကလည်းအကိုအတို့ကပြန်ပြီးရိုက်ရင်ပုန်းပုန်းနေတာကိုး”။အဲဒီတော့မှကျွန်တော်လည်း ဖြစ်မှဖြစ်ရလေအကိုတို့ကိုကျွန်တော်ကလည်း
အချိန်မှာအမည်မသိလူနှစ်ဦးယောက်လာပြီး ကားသမားတွေကိုမင်းတို့ဒီအသုဘကိုလိုက်မပို့ရဘူး။ လိုက်ပို့ရင်မင်းတို့တွေအဖမ်းခံရမယ်လို့လာပြောတော့ကားသမားတွေလည်း ကြောက်ပြီးပြန်ပြေးသွားကြတာတဲ့။သူတို့ကတော့ဒါကိုအစိုးရဘက်ကလုပ်တာလို့ထင်ပြီး
ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံရိုက်မယ်လုပ် တော့သူထဲကတစ်ယောက်ကဒီမှာဓာတ်ပုံမရိုက်ပါနဲ့။ ရိုက်ချင်ရင်ဟိုဘက်ကားလမ်းကသွားရိုက်လို့ထပ်ပြောသေးတယ်ဗျ။ဒီတော့
ကိုယ့်ဝတ်စုံ ကိုယ် ချုပ်လို့ ကျကျနနလှခဲ့ပြီးပြီးပဲ။
လက်ဖ၀ါးတွေနဲ့ကာကွယ်ဖို့ ငါ့တို့ နေရစ်ခဲ့ဦးမယ်..။
ကိုယ်လည်းတာရာမင်းဝေရဲ့ စာတွေ နဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ တာပါ။ သူ့ စာအုပ်တွေ အကုန်လုံးနီပါးကို ဖတ်ပြီးချိန်မှာ..
သူါကို ကိုယ် က တကယ့် စာပေအနုပညာသမားတစ်ယောက်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ် ။
တစ်နေ့ မှာတော့ ကိုယ် သူနဲ့ဆုံဖြစ်ပါတယ် ။ စာပေ အကြောင်းတွေ လည်းပြောဖြစ်တယ် ။။
ပြောဖြစ်တယ် ဆိုတာထက်..သူ ပြောတာတွေ ကို နားထောင်တာပါ ။ အဲဒီမှာ မှ သူ့ ကို ကိုယ် ပို လေးစား မြတ်နိုးမိသွားတယ် .။ ဟုတ်တယ် ….သူဟာ…တကယ့် အနုပညာသမားစစ်စစ် တစ်ယောက်ပါပဲ..။ သူ ကွယ်လွန် သွားတာဟာ…ဘာနဲ့ မှ မတူတဲ့ ဆုံးရှုံးမှု ပါ။ သူ့ လို အနုပညာရှင် မျိုး….
စောစောစီးစီး ဆုံး ရှုံးသွားးတာဟာ…စာပေလောက အတွက်…. အလွန်ပဲ…. နှမြောစရာကောင်းလှပါတယ် ။
ကိုယ် ချစ်တဲ့သူတွေ ထဲ မှာ တာရာမင်းဝေလည်းပါတယ် ။ကိုယ်….14 နှစ်သား ကတည်းက သူ့ စာအုပ်ကလေးတစ်အုပ်နဲ့ စ ရင်းနှီခဲ့ တာ…။ အဲဒီစာအုပ်ကလေးက အရှေ့မြို့ ရိုးမှ..မိုးရေစက်များ..တဲ့ ။ အဲဒီစာအုပ်ကြောင့်ပဲ..ကိုယ် စာပေကို ချစ်မိသွားတာလေ။
မော်ဒယ်စာပေ ကို ဆွဲဆောင်စေနိုင်ခဲ့သူဟာ
အခုနောက်ပိုင်း ကြားရတဲ့ သတင်း ကတော့
ခွေးသုံးကောင် စာပေ က တိုက်ပိုင် နဲ့ 
စာရေးဆရာမ မနော်မရ နဲ့ ငြိနေကြတယ် ဆိုပဲ
မနော်ဟရီက တာရာမင်းဝေ မိန်းမမိုလို့လား။ ဟုတ်တော့ ဘာဖြစ်လဲဗျာ.. တပင်လဲမူ တပင်ထူ အဲဒါဘာဆန်းလဲ..။
ဦးကြောင်ကြီး ကလည်း ကြောင်အချင်းချင်းကတော့ စည်းလုံးနေပါလား။ တစ်ပင်လဲ တစ်ပင်ထူ ဆိုရင် တော့မပြောပါဘူး။ အခုက ဆရာတာရာမင်းဝေ မသေခင်ထဲက ဖြစ်နေတာဆိုတော့ နည်းနည်း တော့ အမြင်ကတ်တာပေါ့ဗျာ။ နောက်ဆရာတာရာမင်းဝေ သေသွားရတာလည်း သူတို့ကြောင့် စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ အ၇က်တွေ ဖိသောက်နေတာလည်းပါတယ်ဗျ.။
နွယ်ပင် လုံးချင်းဝတ္တူစာအုပ် စဖတ်တာ ဆရာတာရာမင်းဝေရေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်လေး တစ်အုပ်နဲပါ ။
နောက်ပိုင်းလဲ ဆရာ့စာအုပ်တွေ အကုန်လုံးကို ဖတ်ရှူဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
ဆရာ ဆုံးပါးသွားတာ မြန်မာစာပေအတွက်တော့ နစ်နာမူတစ်ခုပါပဲ ….